Vaovao - Tonga eto ny solstice fahavaratra
Nanomboka ny solstice fahavaratra tamin'ity taona ity isika tamin'ny 22 Jona, 13 Mey tamin'ny kalandrie volana. Ny solstice amin'ny fahavaratra no fehezin'ny masoandro voalohany voafaritra ao anatin'ny fe-potoana efatra amby roapolo, izay midika fa fanombohan'ny toetr'andro mafana amin'ny fomba ofisialy, ary avy eo mihamafana ny hafanana.
Ny fehezanteny miisa efatra amby roapolo dia vokatry ny sivilizasiona fambolena taloha ary misy ny fiheverana ara-kolontsaina lava sy ny fanangonana tantara ny firenena sinoa. Tany am-boalohany dia nifototra tamin'ny fitarihan'ny Big Dipper amin'ny lanitra amin'ny alina nataon'ny ntaolo mba hitarika ny famokarana fambolena ara-potoana. Ny "Fepetran'ny masoandro efatra ambiroapolo" amin'izao fotoana izao dia avy amin'ny fizarazarana mifototra amin'ny haavon'ny masoandro napetraka mihoatra ny 300 taona lasa izay. Izany hoe, eo amin'ny faribolana 360 degre an'ny "ecliptic" (ny lalan'ny masoandro eny amin'ny habakabaka selestialy mandritra ny herintaona), dia mizara ho 24 faritra mitovy, ampahany iray mitovy isaky ny 15 °, miaraka amin'ny equinox vernal ho ny teboka fanombohan'ny 0 degre, nalamina araka ny ambaratongan'ny ny longitude. Tamin'ny fivoarana ara-tantara, ny "fe-potoana efatra amby roapolo amin'ny masoandro" dia nampidirina tao amin'ny tetiandrom-bolana ary nanjary ampahany lehibe tamin'ny kalandrie lunar. Amin'izao fiainana sy famokarana ankehitriny izao, na dia mbola azo ampiasaina ho toy ny enta-mavesatra aza ny fehezanteny miisa efatra amby roapolo, dia tsy afaka mamaly ny filan'ny olona ankehitriny intsony ny marina sy ny marina.
Ka inona avy ireo fitaovana afaka manome tari-dalana tsara kokoa amin'ny famokarana fiainana sy fambolena? Ny tobin-toetrandro farany an'i Emate dia manome tahirin-kevitra amin'ny fotoana tena izy sy firaketana diachronika momba ny fitarihan'ny rivotra sy ny rotsakorana; izy io koa dia manana ny asany mialoha ny toetrandro mialoha ny toetrandro; Mandritra izany fotoana izany dia manana tobin-toetr'andro mialoha ny fantsom-panafody koa izahay hampahafantatra anao ny toetr'andro ao anatin'ny 4 andro mialoha, ary handehanana mialoha sy hamolavola ny famokarana mialoha. Tongasoa eto amin'ny ekipa mpivarotra matihanina amin'ny antsipiriany!